पाँच किलो चिउराको भरमा पोखराबाट रोल्पासम्मकाे यात्रा ! | Samabesi Khabar
पाँच किलो चिउराको भरमा पोखराबाट रोल्पासम्मकाे यात्रा !
लकडाउन थपिँदै जान थालेपछि पोखरामा रोकिएर बसेका रोल्पाका सात मजदुर बागलुङ हुँदै गृहजिल्ला हिँडेका छन् । सोमबार बिहान चार बजे पोखराबाट हिँडेका मजदुरको समूह मङ्गलबार दिउँसो जिल्ला सदरमुकाम बागलुङमा भेटिएका थिए ।
रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका–६ मचालका सात मजदुर विगत लामो समयदेखि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा आसपासको सडक निर्माणमा कार्यरत थिए । उनीहरु रोल्पाका दुर्गम गाउँका समुदाय देशभर सडक निर्माणमा मजदुरी गरी घरपरिवार पाल्दै आएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणकाट बच्नका लागि नेपालमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी रहेका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर पर्दै आएका छन् ।
दुई दिनमा पोखराबाट बागलुङ आएका मजदुर अबको चार दिनमा रोल्पा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् । उनीहरुलाई बागलुङदेखि रुकुम पुग्नै दुई दिन लाग्नेछ । ज्यालादारीमा कमाएको पैसाले यतिका दिन खान पुगेपनि लकडाउन नखुल्ने भएपछि हिँडेरै घर पुग्न थालेको लुङ्ग्री गाउँपालिका–६ मचालका भविरोका क्षेत्रीले बताउनुभयो । “कमाइको पैसा पनि खानामै सकियो, राहतका नाममा पाएको पाँच किलो चामल पनि खाइयो”, मजदुर क्षेत्रीले भन्नुभयो, “लकडाउन खुल्ने अवस्था नआएपछि बाँच्नकै लागि भए पनि हिँडेर घरतर्फ लागेका हौँ ।” मजदुर क्षेत्रीसँगै सात जनाको समूहले पाँच किलो चिउराको भरमा पोखराबाट रोल्पाका लागि यात्रा तय गरेको दुखेसो पोख्नुभयो ।